Ezilahlwayo razor, Double Edge razor, 3 Blade Banokubulawa razor - Jiali
Kubandakanywa iireyitha ukusuka kwibhanti enye ukuya kweleyidi ezintandathu kwaye zombini ziyafumaneka ukuze zilahlwe kunye nenkqubo yencakuba.
Ububanzi bomswakama obuninzi obubanzi bunezakhamzimba zeVitamin E kunye neAloe Vera.
Iveliswe kwimeko yezempilo. Ikama eliyilwe ngokukodwa lokususa iinwele ngokulula. Zonke iireyiza ziqinisekisiwe yi-FDA.
Iphiko eliphindwe kabini
Yenziwe nge-stainless yaseSweden. Itekhnoloji yokugaya neyokugaya yaseYurophu iqinisekisa ubukhali kunye nokukhululeka.
Intloko eshukumayo Amadoda alahlwayo aBantu abalahlayo abaguquguqukayo ...
Isibambo Soft blade ezintathu uyilo yamandulo amadoda di ...
Super Premium zilahlwe Ezilahlwayo ezintlanu Open Ba ...
Inkqubo ezintandathu Open Back Blade Mens razor Sha ...
Kwizinga eliphezulu zokhuseleko steel stainless blad kathathu ...
Yokubamba Economic ezinde ezilahlwayo umGangatho blade Wo ...
Ukhathalelo lobuqu Stainless Women Banokubulawa ...
Incakuba encinci yebhinqa elincinci kwibhokisi yeplastiki entle ...
Isizwe Sithumela kwelinye ilizwe
Unyaka weJiali wamiselwa
Imveliso yokuThengiswa kweMveliso
Injani intsebenzo yomgangatho wakho wesitshetshe?
I-Ningbo Jiali yinto yokwakha i-razor kunye nembali engama-25. Zonke izinto zebala kunye netekhnoloji zivela eYurophu. Iincakuba zethu zibonelela ngamava okucheba okuhle nokomeleleyo.
Abathengi bahlala behlawula kakhulu kwigama lophawu endaweni yokusebenza kwentsimbi. Izitshetshe zethu zokucheba kunye nezo zinophawu kodwa ngexabiso eliphantsi kakhulu. Kukhetho olufanelekileyo kuwe.
Sinezona mfuno zincinci zobungakanani kuninzi lweeodolo kodwa siya kuqaphela imeko yakho yentengiso njengenkxaso. Ukuxhamla ngokufanayo kuhlala kuyinto ephambili.
Nceda ushiye imiyalezo kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24.
NgoNovemba 13, 2020